Repoblikan’i Sina : NANOME 1 MILIARA AR HANATSARANA NY MAE -
AccueilRaharaham-pirenenaRepoblikan’i Sina : NANOME 1 MILIARA AR HANATSARANA NY MAE
10/01/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mitohy ary mihamafy orina ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa sy miombon’antoka eo amin’i Madagasikara sy Sina.
Ankoatra ireo tetikasa maro avy amin’ny firenena sinoa ho an’i Madagasikara, izay nohamafisin’ny minisitry ny Raharaham-bahinin’izy ireo, Wang Yi, tamin’ny fihaonany tamin’ny filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina, ny sabotsy 7 Janoary teo, nanolotra lelavola mitentina 1 miliara Ar ho an’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny malagasy ny Repoblika entim-bahoakan’i Sina.
Raha ny fanazavana, vola hoenti-manatsara sy manamboatra ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny ity natolotra ity. Mbola tsy nanazava sy namaritra ny amin’ny fanombohan’ny fanamboarana sy fanatsarana kosa, aloha hatreto ny teo anivon’ny minisitera.
Ankoatra izay, anisan’ny tafiditra amin’ny fitsidihan’ny minisitra sinoa Wang Yi eto amintsika ny fankalazana ny faha-45 taonan’ny fifandraisan’ny firenena roa tonta, Madagasikara sy Sina.
Marihina mantsy fa ankoatra ireo tetikasa maro toa ny fanamboarana “autoroute” sy fitrandrahana rano goavana any Atsimo, ny fanamboarana lalamby, ny fanamboarana seranan-tsambo, sns, tafiditra amin’ny dian’ity minisitra sinoa ity ihany koa ny fanamafisana ny fifandraisana ara-politika sy ara-toekarena.
Voamarina, araka izany, fa mpiara-miombon’antoka mahafatra-po amin’i Madagasikara i Sina. Efa maro mantsy ireo fotodrafitrasa natao sy nomen’izy ireo antsika, toy ireo lalam-baovao nandraisantsika ny fihaonana an-tampon’ny Frankôfônia, sns.
Zafy Albert, Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina : Handaniana volam-bahoaka